MUUQAAL+SAWIRRO: Sidee loo arkay xukunka lagu riday kuwii Afduub, Kufsi & Dil u geystay Marxuumad Caasho ILyas Aden? – Puntlandtimes
MUUQAAL+SAWIRRO: Sidee loo arkay xukunka lagu riday kuwii Afduub, Kufsi & Dil u geystay Marxuumad Caasho ILyas Aden?
GAALKACYO(P-TIMES)- Shacabka Soomaaliyeed ee kulma baraha Bulshada ayaa si weyn uga falceliyey talaabadii ay maanta qaaday Maxkamadda Darajada koowaad ee magaalada Garoowe, taas oo ay Dil ugu xukuntay sadex kamid ah dadkii lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen dilkii Caasho Ilyaas Aden oo ahayd gabar yar oo lagu dilay si foolxun magaalada Gaalkacyo.
Dadweynaha kala duwan oo ku kalasugan daafaha Soomaalida oo dhan wey soo dhaweeyeen qaraarka ay qaadatay Maxkamadda Darajada koowaad ee gobalka Nugaal, waxayna sheegeen in ay muhiim tahay in cadaaladda lamariyo kuwa lagu helay Dambiga.
Dawladda Puntland ayay ku amaaneen sida wanaagsan ee ay u maaraysay Kiiskan, isla markaasna u ogolaatay in Maxkamad meel aan aheyn aan lagu qancin dadka dhibtu gaartay, bulshadana ay si furan ugu ogolaatay ka qeybgalka dooduhu intii ay socdeen.
Dambiilayaasha lagu helay in ay ka dambeeyeen Afduubkii, Kufsigii iyo Dilkii foosha xumaa ee loo geystay Caasho Ilyaas Aden ayaa u muuqda kuwa aan dareemin jarimada ay galeen, waxaana muuqaalo ay warbaahintu ka qaaday ka muuqanaya ayagoo qoslaya.
Raggan sadexda ah ee Xukunka lagu riday ayaa Maxkamaddu ay sheegtay in ay ku qanacday dhammaan cadeymaha ay keenen Xeer Ilaalinta dawladda Puntland oo ay ku jiraan dheecamadoodii oo la qaaday lana soo baaray.
Si weyn ayaa isha loogu hayaa Kiiska Caasho Ilyaas Aaden sidii cadaaladda loo marin lahaa kuwa la xukumay, waxaana Madaxweynaha Puntland uu horey u cadeeyey in Cadaaladda ay dawladdu fulin doonto, waxaana isla maxkamaddu ay ku dhawaaqday in Xukunka fulintiisa ay dawladdu sameyn doonto.
Maxkamaddu waxay sheegtay in Racfaan 30 maalmodo gudahood ay qaadan karaan sadexda qof ee dilka lagu xukumay, balse warar hoose ayaa sheegaya in ay cadeymaha oo dhan dhameystiran yihiin.
Madaxweyne Deni halwax ayuu uga duwan yahay madaxdii isaga ka horeeysey. Waxuu saaxiib la noqday xaqa iyo cadaalada. Laakii suashu waxay tahay…. MW Deni ma siiwadi doonaa axdiga uu la galay xaqa iyo cadaalada oo ma u hiilin doonaa shicibka puntland iyo kuwa somaaliyeed oo xaquuqdooda dharaar cad lagu tumanayo. Tolow dalimiinta mudankooda ma sii marsiin doona mise caasho ilyaas ayuu ka dhigan jaranjaro burruta siyaasadeed kor loogu fuulo. La arki doone. Koley taarikhda ayaa xusin
Shicibka puntland iyo dhamaan shicibka somaaliyeed waxay har iyo cabeen ku haminayaan helitaan cadaaladeed , kaasoo noqday shayga ugu qaalisan ee somaali hesho. Somali waxay u baahantahay maxkamad ka madax banaan madax iyo dowlad oona ka madax banaan oday dhaqmeed iyo dhaqan dhaqmeed oo qofkii la dulmana xaqiisa ka helo.